Tag: ihe atụ vidiyo | Martech Zone
Kpido: ihe atụ vidiyo
Shakr: Mepụta nke gị Business Videos Online Iji Onlinetụnanya ndebiri
Wednesday, May 4, 2016 Saturday, January 23, 2021 Douglas Karr
Enwere m obi ụtọ na ọganihu na vidiyo na afọ ndị na-adịbeghị anya. Azụmaahịa ọ bụla nwere ohere idekọ vidiyo maka ụlọ ọrụ ha, mana ọ dịghị mfe. Ewezuga ogo vidiyo, ọkụ na ọdịyo, enwere ọrụ nrụpụta nke na-agwụ ike ma ọ bụ dị oke ọnụ. Enwere m mmasị n'ịme vidiyo, mana na-agagharị na ịde blọgụ ma ọ bụ pọdkastị n'ihi na ọ dị mfe karị. Ka ndị ahịa anyị wee nwee ihe ịga nke ọma, anyị enyerela ha aka ịrụ ụlọ ọrụ a ga-emezi